अमानवीय यातना भाेग्दै २७ पत्रकार महिला |
अमानवीय यातना भाेग्दै २७ पत्रकार महिला
प्रकाशित मिति :2019-03-08 16:44:52
विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउँदै गर्दा सीमा बिहिन रिपोर्टर (आरएसएफ) ले उल्लेख गरेको छ कि, विश्वभरमा २७ महिला पत्रकार अहिले हिरासतमा छन् । केहीलाई अमानवीय अवस्थामा राखिएको छ र केही अत्याचार र यौन दुर्व्यवहारको शिकार भएका छन् । आरएसएफले उनीहरूको बिना सर्त तत्काल रिहाइको लागि आह्वान गरेको छ ।
धेरै भन्दा धेरै महिला पत्रकारितामा प्रवेश गर्दै गर्दा सामन्ती शासनको क्रुर उत्पीडनबाट महिला पत्रकारहरु शिकार हुने संख्या पनि बढेको छ । आरएसएफको अभिलेख अनुसार, फेब्रुअरीको अन्त्यसम्ममा जेलमा रहेका ३ सय ३४ पत्रकारमध्य २७ जना (८ प्रतिशत) महिला थिए । पाँच वर्षअघि, कैद गरिएका पत्रकारहरू मध्य केवल ३५ महिला थिए ।
यी महिला पत्रकार ९ देशहरूमा बन्दी छन् । ईरान र चीन महिला पत्रकारहरुको दुई सबैभन्दा ठूलो जेल हुन् । जहाँ सात–सात महिलाहरुलाई बन्दी बनाइएको छ । त्यसपछि टर्की पर्दछ जहाँ चार महिला पत्रकारलाई थुनामा राखिएको छ ।
साउदी अरेबियामा तीन महिला पत्रकार पक्रिएका छन् । भियतनाममा दुई र इजिप्ट, बहराइन, सिरिया र निकारागुआ एक÷एक महिला पत्रकार थुनामा छन् ।
तिनीहरू लेखका लागि लक्षित सबैभन्दा खराब अपराधहरूको आरोप लगाइयो । तथ्याङ्कहरूले तिनीहरुका लेख वा सामाजिक सञ्जालका पोष्टहरूका कारण लक्षित गरिएका भनिएपनि यी महिलाहरू प्रायः ‘आतंकवादी प्रचार’ ‘एक आतंकवादी समूहको सदस्यता’, वा ‘विदेशी संस्थाहरूसँग संदिग्ध सम्पर्क’ को आरोपमा पक्राउ परेका छन् । यद्यपि, अस्पष्ट र अप्रत्याशित, यस प्रकारका आरोपहरू लामो जेलका सर्तहरू लागू गर्न प्रयोग गरिन्छ ।
ईरानमा, पत्रकार र मानव अधिकारको संरक्षक नर्गेस मोहम्मद पाइनवेवे ब्लग सम्पादक हेंग्गामे शाहीदीलाई ‘राष्ट्रिय सुरक्षा र इस्लामिक गणतन्त्र विरुद्धको ‘षड्यन्त्र’ र ‘न्याय’ प्रणालीको ‘अपमान’ को आरोपमा क्रमशः १० र १२ वर्षको जेल सजाय भएको थियो ।
बेलायत र ईरान द्विपक्षीय नागरिकता भएको रोया सबरी नागड नोबाखत्ले २०१४ मा उनको फेसबुक पोष्टको लागि शुरुमा २० वर्षको जेल सजाय पाएका थिए । योपछि पाँच वर्षमा घटाइएको थियो ।
केही देशहरूमा बाह्य आवाजहरू खारेज गर्नका लागि सम्भावित लामो जेल सर्तहरू लागू गर्न कुनै पनि आरक्षण छैन । जुन चीन मा छ । युगोल मुस्लिम सामुदायिक सदस्य र समाचार वेबसाइट सालकिनका सम्पादकको गुल्मीरा इमीन लाई २०१० मा ‘अलगाववाद’ र ‘राज्य रहस्य खेलेको’ आरोपमा आजीवन कारावासको सजाय भएको थियो ।
एक प्रसिद्ध ७४ वर्षीया पत्रकार नजीली इलकैकले टर्कीमा यस्तै सजाय पाइन् । जुलाई २०१६ मा असफल कु प्रयासको पूर्बसन्ध्यामा एक टिभी प्रसारणमा सरकारको आलोचना गरेको कारण उनी र दुई पुरुष साथीहरू एल्टन दाजु भाइहरूलाई आजीवन काराबासको सजाय दिइयो जहाँ क्षमाको कुनै पनि मौका छैन ।
‘आरएसएफ सचिव (महासचिव क्रिस्टोपी डेलोयरले भने, ‘२७ जना महिला पत्रकार अहिले उनीहरूको स्वतन्त्रताबाट बञ्चित छन् किनभने तिनीहरूले लेखेका थिए । साहसी भई बोल्थे । तिनीहरू अक्सर असामान्य र गलत सजायको शिकार हुन्छन् । उनीहरू तिनीहरूका पुरुष सहकर्मीहरू जस्तै जेल सजाय, र कहिलेकाहीँ यातना र यौन दुव्र्यवहारको शिकार हुन्छन् । हामी उनको तत्काल रिहाईको लागि आह्वान गर्दछौं र हामी संयुक्त राष्ट्रसंघलाई यी घटनाहरू हेर्न आग्रह गर्दछौं ।’
महिलाहरू, तिनीहरूका सहकर्मीहरू जस्तै, अत्यन्तै कठोर कैदीको अवस्थाको अधीनमा छन् । निकारागुआ टिभी समाचार च्यानलको समाचार निर्देशक लुसिआ पिनडेन उब्उ, डिसेम्बरको अन्त्यमा महिला जेलमा पठाउनुअघि मनागुआको एल चिपपोटोको उच्च सुरक्षा जेलमा ४१ दिन बिताइन् । एल चिपोटका अवस्था जहाँ पूर्व सोमोजा परिवारको तानाशाहीले आफ्नो राजनीतिक कैदीहरूलाई शंका गर्न प्रयोग गर्यो, जुन अमानवीय हो ।
एक जना भियतनामी ब्लगर ट्रान थी ना जसले आप्रबासी कामदारहरुको बचाउ गरे उनलाई गिरफ्तारीपछि ६ महिनासम्म नजरबन्दमा राखियो । र, जुलाइ २५, २०१७ मा ‘राज्य विरोधी प्रचार’ अरोपमा ९ वर्षको जेल सजाय सुनाइयो ।
उनलाई लगभग एक वर्षसम्म कसैसँग पनि फोन सम्पर्क गर्न र भेटघाट दिइएन किनभने उनले अपराध स्वीकार्न अस्वीकार गरिन् । उनको वकिल, जसलाई एक पटक मात्र भेट्न मात्र सक्षम थिए, तीनले भने, ‘उनको स्वास्थ्य खतरामा छ ।’
ईरानमा बन्दीहरूको नियमित चिकित्सा सेवालाई निरन्तर रूपमा अस्वीकार गरिन्छ । चाहे ग्रिकक, जुन देशको सबैभन्दा खराब जेलहरूमध्ये एक हो, जहाँ सुफी वेबसाइट मजजवान नुरको लागि काम गर्ने तीन महिला सेपीद मोरादी, अविशा जलालेदीन र शिम एन्टेसरीले पाँच वर्षको जेल सजाय भोगिरहेका छन् ।
ईरानमा बन्दी महिला पत्रकारहरू प्रायजसो जेलको अवस्था पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाको कमीको विरोधमा खतरनाक भोक हडतालमा संलग्न हुन्छन् ।
धेरै संयुक्त राष्ट्रसंघीय रिपोर्टहरूले पुष्टि गरेका छन्, ईरानका महिला बन्दीहरू पुरुष बन्दीहरू भन्दा बढी बिरामी हुन्छन् । महिला बन्दीहरूको अवस्था ईरानको अल्ट्रा, रूढिवादी समाजले लादेको पुरुष र महिलाको अलगाव, बौद्धिक र इस्लामिक शासनका आलोचकप्रतिको परम्परागत घृणाको कारणले बढेको छ ।
‘जेलमा स्वास्थ्य अवस्था पुरुषहरुको लागि एकदमै खराब छ, तर जेलमा स्वच्छताको कमी महिलाहरुको लागि अधिक भयानक र समस्याग्रस्त’ नर्गेस मोदीका पति ताग रहमानीले भने ।
यातना , अपमान र यौन दुर्व्यवहार
तिनीहरूलाई कुनै पनि खराब प्रकारकोदुर्व्यवहारको लागि छाडिएन । चीनमा, गुलमरा इमीनलाई उनको वकिललाई नभेटाइ कागजातहरू हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारियो । महिलाहरुको लागि, शारीरिक यातना बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारको धम्की मिश्रित हुन्छ ।
शोरूक अम्जाद अहमद अलसएद एक फोटो पत्रकारको परिवारको अनुसार, उनको २५ मार्च, २०१८ मा इजिप्टमा गिरफ्तार भएको थियो । उनलाई सार्वजनिक सुव्यवस्था खल्बल्याउने उद्देश्यको साथ एक वेबसाइट बनाएको र निसन्देही मुस्लिम ब्रदरहुडसँग सम्बन्धित भएको स्वीकार नगरुन्जेल बेहोस हुने गरि कुट्नुको साथै बलात्कारको धम्की दिइएको थियो ।
त्यहाँ दुई सउदी महिला पत्रकार, ईमान अल नाफ्जन, जो साऊदी महिलाको रूपमा ब्लग लेख्थिन् र नाफ अब्दुलाजिज अल यरवी, जो अरब नुनका लागि र अन्य वेबसाइटहरूका लागि लेख्थिन उनका बारेमा धेरै चिन्ता जाहेर गरिएको छ ।
साउदी मानवअधिकार गैर सरकारी संगठन अल(कस्स)को अनुसार, तिनीहरू महिला अधिकार कार्यकर्ताहरु मध्यका थिए, जसलाई २०१८ को वसन्तमा यातना दिँदै हिरासतमा लिइयो । जसमध्य केहीलाई यौन दुर्व्यवहार गर्दै कपडा खोल्न लगाएर, अरु बन्दीहरुलाई अंकमाल गर्न बाध्य पार्दै नग्न फोटो खिचिएको थियो ।
साउदी अधिकारीहरूले अझै पनि नफजान र यरवीको विरुद्ध के आरोप लगाइएको हो ? भनेका छैनन् । अन्य ६ महिला पत्रकार अहिले विश्वको अन्य भागहरूमा अनुसन्धान बिना हिरासतमा छन् ।
केही घटनामा, तिनीहरूका परिवारले तिनीहरूसँग सबै सम्पर्क गुमाएका छन् । चीनमा, कसैलाई पनि थाहा छैन कि ती तीन महिला पत्रकार, झांग जीक्सीन, क्विन चाओ र ली जाओक्सुको अवस्था के छ ? जो सन् २०१५, २०१६ र क्रमशः २०१७ मा गिरफ्तार गरिएका थिए ।
सिरियाका ब्लगर तल अलमल्लूलाई पनि हिरासतबाटै हराइन् । सन् २०११ मा उनीलाइ पाँच वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो जो लामो समय अगाडि रिहा भइसकेको हुनुपथ्र्यो ।
उनी अन्तिम पटक २०१६ मा जिवीत देखिएकी थिइन् । जब उनलाई दमस्कसमा राज्य सुरक्षा जेलका लागि हस्तान्तरण गरिएको थियो । डिसेम्बर २००९ मा उनको गिरफ्तारीको समयमा उनी संसारकै सबैभन्दा सानी महिला पत्रकार थिइन्, जो गीरफ्तारमा परेकी थिइन् । त्यतिबेला उनी १८ वर्षकी मात्र थिइन् । जो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो समय जेलमा कैद हुनेमा पर्छिन् ।